Mayelana | Ibhulogi ye-FXCC
Siyakwamukela kubhulogi lokuhweba le-FXCC. Yilapho uzothola ukuphawula kwethu emakethe nezinye izihloko ezithakazelisayo mayelana nezwe lokuhweba ngemali, abathengisi be-forex kanye nazo zonke izinto ezihlobene ne-forex.
Inhloso yethu ukugcina uvuselelwe nazo zonke izindaba eziphukayo kanye namazwana avela embonini yethu ngakho thatha isikhathi sokuphequlula izihloko zethu ngezibuyekezo.
I-FXCC ihlose phezulu futhi siqhubeka nokuhamba nohla lwemikhiqizo yethu. Zonke izibuyekezo nezengezo esizenzayo emkhakheni wethu wemikhiqizo ye-forex yokuhweba zizogqanyiswa kubhulogi, ngakho-ke iseluleko sethu sizoba uphawu lokubhalisa le bhulogi bese ubuyela kithi njalo.